MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA EE LOO YAQAAN 'ENGAM BULLDOG DOG' - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee loo yaqaan 'EngAm Bulldog Dog'
Bulldog Mareykan / Ingiriis Bulldog Isku-dhafan ey
Kani waa Eygeyga 'Engam' ee loo yaqaan 'Chico' oo 5 bilood miisaankiisu yahay 40lbs. Isagu waa jiilkii koowaad. Hooyadiis Bulldog Mareykan ah iyo aabihiis Ingiriis Bulldog . Waxaan ku helay 2 bilood markii uu miisaamay 6.5lbs oo keliya.
Ingiriis Mareykan Bulldog
EngAm Bulldog ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Bulldog Mareykan ah iyo Ingiriis Bulldog . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Olde Bulldog
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Olde Bulldog
Diiwaan Geliyaha naqshadeeyaha = Olde American Bulldog
Gunner kala badh Mareykan Bulldog / badh Ingiriis Bulldog isku dhafka eyga da'da 7 sano jir
bulmastiff iyo sheybaarada isku qasan eeyaha
'Tani waa Bucksnort II-tolid Waqtiga, inta badan loo yaqaan' Stitch '. Tolmada waa Ingiriis / Bulldog Ingiriisi ah. Hooyadiis waxay ahayd Bulldog ingiriis ah oo cadaan ah, aabihiisna wuxuu ahaa Bulldog Mareykan ah. 1 sano iyo 6 bilood ayuu ku jiraa sawirkan, miisaankiisuna waa 60 rodol. oo taagan 16 inji oo garbihiisa. Tolmada, sida Bulldogs badankood yihiin, waa mid madax adag oo madax adag. Haddii aad siiso hal inji, filo in lagaa qaado mayl. Waxaan helay Stitch markii uu ahaa qiyaastii 12 toddobaad wuxuuna ahaa eeygii ugu xumaa ee aan waligay la kulmo, laakiin waqti badan iyo tababar xoog leh waa eeyga ugu fiican ee aan abid yeesho waligayna yeelan maayo nooc kale eey. Wuxuu jecel yahay cananaaska iyo liinta, wuu neceb yahay qiiqa sigaarka iyo biir raqiis ah - haa, wuxuu cabayaa oo kaliya Warsteiner iyo Red Stripe ... waa yaab. '
'Rocko, oo lagu muujiyey halkaan 5 bilood jir, waa isku-dubbarid Eng / Am bulldog (jiilkii koowaad). Isagu badiyaa waa cadaan, madaxana, cududdiisa, dhabarkiisa iyo lugaha baalal jilicsan ayaa ku leh. Wuxuu leeyahay tanno dhibco madow caloosha hoosteeda. Hooyadiis waa 70-lbs Ingiriis saafi ah, halka aabihiis, Mareykan ah, culeyskiisu ka hooseeyo 80 rodol. Waxaa naloo sheegay nirgihii, oo lahaa labada eeyo, in awoowgiis culeyskiisu yahay 90 lbs. !! 5 bilood gudahood, Rocko wuxuu horey u culeyskiisu ahaa 50 lbs. Isagu waa mid ciyaar badan oo aad u jecel. Wuxuu jecel yahay salaaxida oo loo hayo sida ilmaha oo kale. Wuxuu jecel yahay inuu qubeys , oo haddaanan albaabka xidhin, wuu iga yaabin karaa isagoo boodboodaya! Isagu waa mid caqli badan, daacad ah oo AAD u madax adag. Wuxuu uun sameeyaa wuxuu doonayo ee aan wax intaa dhaafsiisan jirin. Wuxuu doonayaa dareenka qof walba wuxuuna si wanaagsan ula ciyaaraa carruurta iyo xayawaannada kale. Walaalkiis waa 'Chow mix' oo waxay ciyaaraan subax, duhur, iyo habeen (in kastoo Rocko u baahan yahay inuu seexdo inta u dhexeysa!) Aad buu u cunaa, gurigeyga ayuu jeexjeexaa, kabihiisa ayuu cunaa, mararka qaarkoodna wuxuu u ciyaaraa si qallafsan, laakiin dhamaadka maalinta, markaan sariirta la jiifo isaga oo dhinacayga ka khuuraya, intaas oo dhami waa u qalantaa! '
'Amos Moses waa cagajuglaydayda iyo eeyga adduunka ugu fiican! Hooyadiis waxay ahayd 100% Bulldog Mareykan ah, madow adag oo miisaankeedu yahay 120 rodol. Aabihiis wuxuu ahaa 100% Ingiriis Bulldog wuxuuna culeyskiisu ahaa 90 rodol. Kursiga uu ku fadhiyo markii uu 10 bilood jirayna wuxuu culeyskiisu ahaa 90 rodol. Wuxuu gaadhay 120, laakiin sinta ayuu ka jabay markii uu qaniinay gaari xamuul ah. Si buuxda ayuu hada u soo kabtay culeyskiisuna waa 90 rodol. Wali wuxuu rabaa inuu qaniino taayirada waxkasta oo dhaqaaqa! Intaas aan ka ahayn waa xoog sheegasho weyn! '
'Caanka caanka ah Amos Moses wuxuu leeyahay aabe hufan oo Ingiriis Bulldog ah iyo Bulldog Mareykan ah hooyadiis. Waxaan ka helnay Amos qoys ku yaal Corning, NY, oo lahaa qashin afar ubax ah. Waxaan keenay gurigiisa markii uu jiray 7 toddobaad asaga oo kaliya 9 bilood noqday miisaankiisuna yahay 85 lbs Waxaan ku socdaa isaga 1-3 mayl maalintii , cimiladu saamaxdo, oo waligiis ma doonayo inuu joojiyo. Markaan gudaha galno wuxuu si dhakhso ah u cabayaa biyo badan. Wuxuu maraa ku dhowaad 2 galaan oo biyo ah maalintii. Waa nin jilicsan oo ka cabsanaya hooskiisa. Weligiis ma dhaawici doono qof bini aadam ah maaddaama aysan ku jirin dabeecaddiisa. Intaas markii la sheegay, waa eey aad u fiican oo aad u cabsi badan in la fiiriyo. Jiridiisu waxay u egtahay sida Mastiff-ka oo waa dhagool. Aad ayuu u ahaa tababar fudud oo uusan waligiis shil ku dhicin gudaha. Wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro iftiinka leysarka daal iyo jeclaan inuu jeexjeexo oo xijaabiyo xayawaanka cufan. Qalabka lagu ciyaaro ayaa ku dhammaada daqiiqado, mararka qaarkood ilbiriqsiyo, oo wuxuu si sharaf leh kuugu soo bandhigayaa qiiqa gudaha ah afkiisa qulqulaya. Wuxuu sifiican u yaqaana ereyga 'masax' madaxana wuu foorarsan doonaa markuu cabo si aan uga saarno biyaha xad-dhaafka ah. Wuxuu doonaa cun wax kasta waana si fudud farxad in la arko. Qof kasta oo arka isaga ayaa ku dhaca jacayl oo doonaya inuu korsado. Aad baan u jecel nahay Amos isaguna waa soo dhoweyn lagu soo kordhiyay qoyskeenna. '
Caanka caanka ah ee Amos Moses oo ah 7-toddobaad eey yar
Dhabarka dambe ee Amos Moses
Suuf ah Bulldog Ingiriis Mareykan ah 6 bilood iyo illaa 40 rodol - 'Hooyadeed waxay ahayd Bulldog Mareykan ah (60 lbs.) Aabeheedna wuxuu ahaa Bulldog Ingiriis ah (45 lbs.).'
Jiggly Pop ee 'EngAm Bulldog' sida eey markay jiraan 2 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo ah 'EngAm Bulldog'
Sawirada EngAm Bulldog 1
Pyrenees weyn collie xadka miisaan isku darka
iskudhafka ingiriisiga iyo iskudhafka rottweiler